May you showagesture of goodwill! – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
May you showagesture of goodwill!
အခုတလော ဂျာနယ်တွေမှာ လူအတော်များများ ရေးလို့ ကောင်းနေကြတဲ့ စာလုံးတစ်လုံးအကြောင်းကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ပြောချင်လာရပါတယ်။
တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ “အီလစ်”ဆိုတာကြီးပါပဲ။ ပြောချင်ဆို အဲဒီ့ အသံထွက်က သွက်သွက်ခါအောင် မှားနေတာကိုးခင်ဗျ။ ဟိုလူကလည်း အီလစ်၊ သည်လူကလည်း အီလစ်နဲ့၊ တအီတည်း အီ၊ တစ်လစ် တည်း လစ်နေကြတာမို့ ငါများ မှားနေသလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကျွန်တော့်ခမျာလေးမှာလည်း ရှိရှိသမျှ အဘိဓာန်ပေါင်းစုံက သဒ္ဒဗေဒတွေကို မွှေနှောက်ကြည့်ရသေးတဲ့အပြင် ကွန်ပျူတာနဲ့ ကြည့်ရတဲ့ အဘိဓာန် သုံးမျိုးနဲ့လည်း ကွန်ပျူတာကို အသံထွက်ခိုင်းပြီး နားဆင်ကြည့်လိုက်မိရပြန်ပါသေးတယ်။
ဘယ်အဘိဓာန်ရဲ့ သဒ္ဒဗေဒ၊ ဘယ်အဘိဓာန်က ထွက်ပြတဲ့ အသံမှ မအီလည်း မအီသလို မလစ်လည်း မလစ်တာ တွေ့တော့မှ သည်စာကို ရဲရဲကြီး ချရေးမိရတော့တာပါပဲ။
အခု အီလစ်လို့ အသံထွက်နေကြပုံက တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လိုက်မင်းသမီးကြီးကို “အဲလစ်ဇဘက် တေလာ”လို့ အသံထွက်ပုံနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အင်္ဂလိပ်စကား ပြောသူကမှ အဲဒီ့မင်းသမီးကြီးကို “အဲလစ်ဇဘက်”လို့ မခေါ်သလို လတ်တလော ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးကိုလည်းပဲ “အဲလစ်ဇဘက် ဘုရင်မကြီး” [ခွီး(န်) အဲလစ် ဇဘက်]လို့ မခေါ်ပါဘူးခင်ဗျား။
သို့ပေမယ့် ဘယ်ရွှေဉာဏ်ရှင်က စတင်ပြီး အသံဖလှယ်လိုက်သလဲတော့ မသိဘူး။ မင်းသမီးကြီးရော ဘုရင်မကြီးပါ ရွှေတို့ ပါးစပ်ထဲ ရောက်တော့မှ မူလနာမည်မှာ “အဲ” မပါဘဲ တအဲအဲနဲ့ အခေါ်ခံနေကြရရှာလေတော့တယ်။ [သူတို့ကလည်း မြန်မာကို “မိုင်အဲ(န်)မား”တို့၊ သန်းကျော်ကို “သှယ်(န်)ခိုင်အော်”တို့ ဖတ်ကြတော့ ကျေရောပေါ့လို့ တွေးမယ်ဆိုလည်း တွေးနိုင်ပါတယ်နော့။] အမယ်… တချို့က မအဲဘဲ အယ်ပြီးတော့ “အယ်လစ်ဇဘက်”လို့ လုပ်တာ ရှိသေးတယ်။
တကယ်တော့ ဘယ်ဘာသာစကားမှာဖြစ်ဖြစ် အသံနေအသံထား၊ အသံ အဖိ အဖော့ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင်ဖြင့် ဂရုသံ၊ လဟုသံ စသဖြင့်ပေါ့ခင်ဗျာ။ ဆိုကြပါစို့… “ဓန”ဆိုတဲ့ မြန်မာဝေါဟာရကို ဖတ်ရာမှာ နောက်က နငယ်သံကိုသာ ဖိပြီး ဖတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ပထမ အက္ခရာ ဓအောက်ချိုက်အသံကို ဖိမဖတ်ပါဘူး။ ဓအောက်ချိုက်သံကိုသာ ဖိဖတ်ရင် /ဒါ့နာ့/လို့သာ ဖြစ်သွားမှာမို့ ဘယ်မြန်မာမှလည်း “ဓန”ကို ပြောနေမှန်း မသိနိုင်ပါဘူး။
ရထားဆိုလည်း သံမှန်က ဒုတိယစာလုံး “ထား”ကိုသာ ဖိဖတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွန်တလိုင်းသံ ဝဲတဲ့ အောက်ပြည်အောက်ရွာ မော်လမြိုင်နယ်က လူတွေ ဖတ်ရင်တော့ ရထားကို /ယာ့ထား/လို့ ဖတ်ကြတာ အကြားရများပါတယ်။ သူတို့က ရှေ့ဆုံးက ရကောက်ကို ဖိပြီး ဖတ်တတ်ကြတာကိုး။ သံလျင်ကို တညင်လို့ ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒုတိယစကားလုံး “ညင်”ကိုသာ ဖိဖတ်တာမို့ /တညင်/လို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ပထမစကားလုံးဖြစ်တဲ့ တဝမ်းပူကိုသာ ဖိဖတ်ရင်တော့ သံလျင်ခမျာမှာလည်းပဲ /တာ့ညင်/ဖြစ် သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲသလိုသာ ဖတ်လို့ကတော့ ဘယ်မြန်မာကမှလည်း သန်လျင်ကို ပြောနေမှန်း ရိပ်စားမိတော့မှာကို မဟုတ်တော့ပြန်ဘူး။
Elizabeth ဆိုတာလည်း ရေးတော့သာ ရှေ့ဆုံးမှာ “အီး” ရှိနေတာ၊ အသံထွက်ရာမှာ ဖိရမယ့် အသံကကျတော့ “လစ်(ဇ်)”မှာ ကျရောက်တာမို့ မင်းသမီးကြီးကို ချစ်စနိုးနဲ့ “လစ်(ဇ်) တေလာ”လို့သာ အဲဒီ့ခေတ်က စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ရည်ညွှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ “အဲ” တေလာလို့ မရည် ညွှန်းခဲ့တာလည်း အထင်အရှားပါပဲ။
အဲတော့ Elizabeth ရဲ့ တကယ့်အသံထွက်အမှန်က “အလစ်ဇ ဘက်(သ်)”သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ “အလစ်”ကို ဖတ်ရာမှာ အလစ်ချောင်းတာ၊ အလစ်သုတ်တာတို့ကို ဖတ်သလိုပဲ /အလစ်/လို့သာ ဖတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ ဘယ်ရွှေဉာဏ်ရှင့် လက်ချက်လဲတော့ မသိဘူး။ အဲဒီ့ လစ်(ဇ်)များ ခမျာမယ် ရွှေတွေ့ပါးစပ်ထဲမှာ တအဲလစ်တည်း အအဲလစ်ခံ နေကြရရှာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ပေါင်းသလို အလစ်ဇဘက်(သ်)လို့ မပေါင်းချင်ဦးတောင် အနည်းဆုံး “အလစ်ဇဘက်”လောက် လုပ်ရင်ကို တော်တော်လေး နီးစပ်နိုင်ပါလျက်ကနဲ့ ဘယ်လို စေတနာကန်းမှုမျိုးနဲ့ “အဲ”ချလိုက်ကြမှန်းလည်း တွေးမရနိုင်ပါဘူး။
အခုလည်း လုပ်နေကြပြန်ပြီ။ အီလစ်တဲ့။ အဲဒါလည်း စာလုံးပေါင်းက elite ပါ၊ élite လို့လည်း တချို့က ပေါင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ပေါင်းပေါင်း သူလည်း အလစ်ဇဘက်(သ်)လိုပဲ ပထမဆုံးက “အီး”သံကို လဟုသံ (သံဖော့) ထားပြီး ဖတ်ရတဲ့ ဝေါဟာရ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်က lite ကိုပဲ ဂရုသံ (သံပြင်း)နဲ့ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် “အီလစ်”ဆိုတဲ့ အသံထွက်မှာ “အီ”ဆိုတာ ပထမ အလွဲပါ။
ဒုတိယအလွဲက lite ကို သည်ဝေါဟာရအတွက် အသံထွက်ပုံပါ။ အဲဒီ့ဝေါဟာရက သူ့ချည်းဆိုရင် light နဲ့ အသံထွက်ချင်း တူတဲ့ /လိုက်(ထ်)/ပါ။ ဒါပေမယ့် élite မှာတော့ အဲသလို မထွက်တော့ပါဘူး။ /လိ(ထ်)/လို့သာ ထွက်ပါတော့တယ်။ လစ်(ထ်) (lit) မဟုတ်တာတော့ အင်မတန် သေချာပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် elite ကို အသံထွက်ချင်ရင် /အလိ(ထ်)/လို့ အသံထွက်မှ မှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် élite လို့ ရေးထားတာမို့ ပြင်သစ်ဆန်ဆန်လေး အသံထွက်မယ် ဆိုရင်တော့ /အေလိ(ထ်)/လို့ ထွက်ရမှာပါ။ ဝေါဟာရ သမိုင်း (နိရုတ္တိ) အရ ဆိုလည်း အမှန်စင်စစ် အဲဒီ့ elite ဟာ ပြင်သစ် ဝေါဟာရ élite က လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့် မူရင်း ရှေးဟောင်း ပြင်သစ်စကားလုံးက eslit ဖြစ်ပြီး eslire (ရွေးချယ်သည်)ဆိုတဲ့ ကြိယာရဲ့ past participle ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ဇာစ်မြစ်ကတော့ လက်တင် ဝေါဟာရ eligere ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ… နောက်တစ်ခုက အဲဒီ့ အလိ(ထ်)ဟာ အခု လူအတော် များများ ဇန်းတင် သုံးစွဲနေတဲ့ “ရေပေါ်ဆီ” ဆိုသော အနက်အပြင် တခြား အနက်တွေလည်း များစွာ ရှိပါသေးတယ်။ အများစုက မနှစ်မြို့တဲ့ အနက်နဲ့သုံးပေမယ့် အဲဒီ့ အလိ(ထ်)ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အကောင်းဘက်ကလည်း အများကြီး သုံးလို့ရတာကို အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာ လိုက်စားနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေ သိထားသင့်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
အလိ(ထ်)ကို Merriam-Webster Collegiate အဘိဓာန်က အောက်ပါအတိုင်း အနက်ပွား ငါးမျိုး ခွဲပေးတားပါတယ်။ (သူက အပြည့်စုံဆုံး ဖွင့်ဆိုပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ခေတ်အမီဆုံး အဘိဓာန်ဖြစ်တဲ့အတွက် သည်အဘိဓာန်ကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
(a) the choice part : CREAM
ဒါက အခု အီလစ်၊ အီလစ်နဲ့ အီပြနေကြသူ လူအတော်များများ ပြောတဲ့ “လူ့မလိုင်”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ သို့သော် မနှစ်မြို့တဲ့ လေသံနဲ့ ခေါ်တာ မဟုတ်ကြောင်းကို အဲဒီ့ အဘိဓာန်ရဲ့ အဲဒီ့ ပထမ ဖွင့်ဆိုချက်မှာ ပါတဲ့ ဥပမာက ထင်ရှားစေပါတယ်။ သူပေးထားတဲ့ ဥပမာက the elite of the entertainment world ဖြစ်ပါတယ်။ “ဖျော်ဖြေရေး လောကရဲ့ ထိပ်ဆုံးတန်းက လူတွေ”လို့ပဲ ဘာသာပြန်ရမှာပါ။ အပေါ်လွှာတို့၊ ရေပေါ်ဆီတို့ သုံးလိုက်ရင် အောက်ကလိအာသံ ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအနက်ကို အဲဒီ့အဘိဓာန်က သည်လို ဆက်ဖွင့်ထားပြန်ပါတယ်။
(b) the best ofaclass
သည်မှာကျတော့ လူတန်းစားတစ်ရပ်ရဲ့ အချွန်ဆုံးလူတွေကို အလိ(ထ်)လို့ သတ်မှတ်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ နမူနာကိုတော့ superachievers who dominate the computer elite လို့ ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီ့ နမူနာကို အဘိဓာန်က ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝေါ(လ်) စထြိ ဂျာနယ်ရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် သတင်းထောက် စာရေးဆရာမ မယ်ရလင်(န်) ချေ့(ဇ်)ရဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲက ဝါကျပျက်တစ်ခု ကို နမူနာ ထုတ်ထားတာပါ။ မြန်မာလို ပြန်ဆိုရင် “ကွန်ပျူတာလောကက အချွန်ဆုံးတွေကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ထိပ်တန်းက အောင်မြင်မှုရနေသူများ”လို့သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သည်မှာလည်း အောက်ကလိအာသံ လုံးဝ မပါတာကို ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
(c) the socially superior part of society
ဒါကတော့ အထက်တန်းလွှာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကိုလည်း အေပီ သတင်းဌာနက သုံးခဲ့တဲ့ ဝါကျပျက်နဲ့ပဲ နမူနာပေးထားပြန်ပါတယ်။ how the elite live တဲ့။ ဂုဏ်အရ၊ ပညာအရ၊ ကြွယ်ဝမှုအရ ထိပ်ပိုင်းမှာ ရှိနေသူတွေကို ခြုံပြီး ပြောတာပါပဲ။ နောက်နမူနာတစ်ခုကကျပြန်တော့ အီခနားမစ်(စ်)(ထ်)သတင်းဂျာနယ်ထဲက ကိုးကားထားတာပါ။ how the French-speaking elite was changing လို့ပေးထားပါတယ်။ “ပြင်သစ် စကားပြောတဲ့ အထက်တန်းလွှာက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပြောင်းလဲနေပုံ”လို့ ဘာသာပြန်ရင် ဆီလျော်ပါလိမ့်မယ်။
(d)agroup of persons who by virtue of position or education exercise much power or influence
ရာထူးအရဖြစ်စေ၊ ပညာတတ်လို့ပဲဖြစ်စေ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ဒါမှမဟုတ် အစွမ်းတွေ လွှတ်ပြတတ်တဲ့ လူတစ်စုကို အလိ(ထ်)လို့ ခေါ်နိုင်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုချက်ပါ။ နမူနာအဖြစ် အဘိဓာန်က ပေးထားတဲ့ စကားစု နှစ်စု ကတော့ members of the ruling elite (အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ဩဇာရှိတဲ့ သူများ) နဲ့ the intellectual elites of the country (နိုင်ငံရဲ့ ဩဇာရှိ ပညာတတ်များ) ဖြစ်ပါတယ်။
(e)amember of such an elite
ဒါကတော့ အထက်က လူတန်းစားတစ်ရပ်ထဲမှာ ပါဝင်နေသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ဧကဝုစ်အနေနဲ့ သုံးကြောင်း ခွဲပြထားတာပါ။
၁၉၇၄ခုနှစ်ထုတ် Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 3rd Editionကို အခြေခံထားတဲ့ မြန်မာစာအဖွဲ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓာန်မှာတော့ နှိမ့်ချပြောဆိုတဲ့ (derogatory)အနက်များကိုသာ ဖွင့်ဆိုပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ထက်ခေတ်မီတဲ့ တခြား Oxford အဘိဓာန်များမှာတော့ ကောင်းတဲ့ ဘက်က သုံးတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်များကိုပါ ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
သည်လောက်ဆိုရင် တချို့တွေ ကွက်ပြီး ပြောနေတဲ့ “လူ့မလိုင်၊ ရေပေါ်ဆီ”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် တစ်မျိုးတည်းသာမကဘဲ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့လည်း အလိ(ထ်) သို့မဟုတ် အေလိ(ထ်)ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ကို သုံးနိုင်ကြောင်း အများသိလောက်ပြီလို့ မျှော်လင့်နေမိရပါတယ်။
ရှင်သန်နေတဲ့ ဘာသာစကား မှန်သမျှဟာ ကာလ ရွေ့လျောတာနဲ့ အညီ အနက်သဘောတွေ ပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။ အခြောက်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ လောက်က တခြားအနက်နဲ့ တွင်ကျယ်ခဲ့တာပါ။ အခုကျတော့ မိန်းမလျာကို ပြောတာ ဖြစ်သွားပါပြီ။ အလားတူပဲ ဂန်ဒူးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို မကြားရတာ အတော်ကြာနေပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်း gay ဆိုတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ လောက်က ပျော်ရွှင်မြူးကြွသောဆိုတဲ့ အနက်နဲ့ သုံးခဲ့ပေမယ့် အခုကာလမှာတော့ မိန်းမလျာကို ဆိုလိုတာမို့ ဘယ်အင်္ဂလိပ်ကမှ မူရင်းအနက်မျိုးနဲ့ မသုံးတော့တာလည်း အမှန်ပါ။
အလိ(ထ်)ကလည်း ကာလ ရွေ့လျောလာတဲ့အခါ တစ်ဖက်သားကို နှိမ်ချတဲ့ အသုံးအနှုန်းကနေ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာ အထက်က ဖွင့်ဆိုချက်များအရ ထင်ရှားလို့နေပါတယ်။
အမှားသိပ်ကြာလာတဲ့အခါ အမှန်ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ပြောမိတာပါ။
သည်တစ်လုံးတည်းတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့က ဂျာနယ်တစ် စောင်မှာ ဝါရင့်၊ သမ္ဘာရင့်၊ အသက်ရင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက မဟုတ်တမ်းတရား မြန်မာသံဖလှယ်ပြီး ရေးထားတာတွေ့လိုက်ရပါသေးတယ်။
အဲဒါကျတော့ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းကောင်းမတတ်ခင် ကလေးဘဝကတည်းက မြန်မာလို အသံထွက်မှန်နဲ့ ဖတ်ခဲ့ဖူးပြီး အင်္ဂလိပ်စကားမှန်းတောင် မသိခဲ့ပါ ဘူး။ မြန်မာစကားလို့တောင် ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စာအဖတ်အရှု များလာတော့မှသာ အင်္ဂလိပ်စကားမှန်း၊ အလိ(ထ်)လိုပဲ ပြင်သစ်ဘာသာစကားက ဆင်းသက်လာတဲ့ ဝေါဟာရမှန်း သိလိုက်တာပါ။
အဲဒါကတော့ “ကလီရှေး” ဆိုတာပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်လို cliché လို့ စာလုံး ပေါင်းပါတယ်။ ဒါကိုကျ ရှေးကတည်းက အသံဖလှယ်ထားပုံက မှန်နေပါတယ်။ တကယ့် အသံထွက်ကိုက “ကလီရှေး” ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “သုံးဖန်များလွန်းလို့ ဖန်တစ်ရာတေနေတဲ့ လက်သုံးစကား”ဖြစ်ပါ တယ်။ ဆိုကြပါစို့… “မိန်းမ မာယာ သည်းကိုးဖြာ”ဆိုတဲ့ စကားမျိုးဟာ ကလီရှေး ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒါကိုပဲ ဟိုတစ်နေ့က ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တစ်ဦးက “ကလီချေ”ဆိုပြီး ထလုပ်လိုက်တာ တွေ့ရတဲ့အခါ ကျွန်တော့်မှာ မျက်လုံးပြူးသွားရပါတယ်။
လူငယ်တွေအပေါ် စေတနာ ကန်းတာပဲလား၊ ထွင်ချင်စိတ် လွန်ကဲသွားပြီး ပမာဒလေခသွားတာပဲလားတော့ သူကိုယ်တိုင်မှပဲ သိပါလိမ့်မယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကို ထင်သလို အသံထွက်ပြရအောင် ကျွန်တော်တို့အတွက် မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တာကို လူတိုင်း သတိထားသင့်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စာမျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ အများမြင်သာတဲ့ မီဒီယာတစ်ခုခုကဖြစ်စေ ပြောဆို ရေးသား သုံးနှုန်းကြတဲ့အခါ လူငယ်လေးတွေ အမှတ်မမှားစေချင်တဲ့ အနိမ့်ပါးဆုံး စေတနာလေးလောက်တော့ မီဒီယာကို သုံးနေသူ အားလုံးရှိထားသင့်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျား။
(ရန်ကုန် – ဝ၃၀၇၁၀)
အဓိက ကိုးကားတဲ့ အဘိဓာန်စာရင်း
၁။ Merriam-Webster Collegiate Dictionary, 11th Edition (Both Hard and Soft Copies of Version 3.1)
၂။ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 3rd Edition (Both Hard and Soft Copies)
၃။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြန်ကြာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာ အဖွဲ့က ထုတ်ဝေတဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန် (Both Hard and Soft Copies)
၄။ The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Third Edition
၅။ Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Encyclopedic Edition
[မနေ့က (၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၆ ရက်) နေ့စွဲနဲ့ ထွက်လာတဲ့ Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်တာပါ။]
Author lettwebawPosted on7August 2010 18 October 2010 Categories Discussion, Reproduction
4 thoughts on “May you showagesture of goodwill!”
7 August 2010 at 9:06 am
ဆရာရေ… အသံထွက်ကိစ္စကတော့ အတော့်ကို ရေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမျိုးလေးတွေ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် ရေးပါဗျာ။ တချို့ဆို အသံထွက်တောင် မဟုတ်ဘူး ဘာသာပြန်တာပါ တလွဲတွေ လုပ်တယ်။ Dragon Fly ကို နဂါးပျံများ ဆိုပြီး အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုက ဘာသာပြန်ပြီး လွှင့်တာကတော့ အတော်ရုပ်ဆိုးတယ်ဗျာ။
8 August 2010 at 10:44 am
အီလစ်လို့ခေါ်တာ ပိုသဘောကျတယ် လူ့မလိုင် ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယ် ပါ ပါတဲ့အတွက် အသံထွက်ထက် အဓိပ်ပါယ်ပိုနီးစပ်တယ်။
9 August 2010 at 10:37 am
မြန်မာတွေ မွေးစားစာလုံးအဖြစ် အသုံးများတဲ့ English အသံထွက် တွေကို မှန်ကန်စွာ ပြော နိုင်အောင် လွယ်လွယ်ရှာနိုင်အောင် ဆရာ အိပ်ဆောင် စာအုပ် မျိုး ပြုစုနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ ဥပမာ Oil, Restaurant စသည်ဖြင့်။ စာအုပ် ပြုစုပြီးသားဆိုရင်တော့ ပြောပါဦး ဆရာ။ Oil ကို ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ အသံထွက်နဲ့ ပြောရင် နိုင်ငံ ခြားသား နားမလည်ဘူး။ ကျနော့ ကိုယ်တွေ့ပဲ။ ကျနော်ဆို မှားမှန်း သိတာတောင် အကျင့်ပါနေတော့ အဲဒီ အမှားသံကို မှားမှား ထွက်နေတုန်း ဆရာရေ။
11 August 2010 at 1:19 pm
LeaveaReply to အုပ်စိုး Cancel reply
Previous Previous post: About Foreplay
Next Next post: The Trouble of BeingaWoman 2: Part One